Tattoo Accessories ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Tattoo Accessories Factory
Tattoo Thermal Transfer Machine (၁) Fuss Free Operation - ဖက်စ်စက်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်။ (၂) Compact ယူနစ်ဟာသင့်ရဲ့တက်တူးစတူဒီယိုမှာအဖိုးတန်နေရာယူမှာမဟုတ်ဘူး။ (၃) အရေပြားကိုတိုက်ရိုက်ပုံဆွဲဖို့အချိန်ကုန်သက်သာစေခြင်း (4) Let you (၅) သင်၏တက်တူးထိုးခြင်းကိုပိုမိုထိရောက်စေရန် (၆) USB နှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင်သိမ်းဆည်းထားသောပုံရိပ်များနှင့်မိတ္တူများကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။ (7) ယူရန်လွယ်ကူခြင်း၊ ပေါ့ပါးခြင်း၊ စျေးနှုန်းချိုသာခြင်း အရည်အသွေး (8) အချိန်ပြည့်ကုန်ပစ္စည်းအပြည့်အစုံအင်္ဂါရပ်များ: 1.Porta ...
Disposable အပြာရောင် Tattoo Clip ကြိုးအတွက်အိတ် ၁၂၅pcs ပလပ်စတစ် Tattoo Clip ကြိုးအိတ်
အသုံးပြုရန်လက်တွေ့ကျပြီးအညစ်အကြေးရှိသောတစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပြာရောင်ပလပ်စတစ်ကိုလက်ခံခြင်း။ သင့်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ကလစ်ကြိုးများအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်အိတ်များ။ စက်အလုပ်လုပ်သောအခါဆူညံသံကိုထိရောက်စွာလျှော့ချပါ။ ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း (သို့) ဆေးမင်ကြောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအခြားမလိုလားအပ်သောအကျိုးဆက်များကိုရှောင်ရှားခြင်း။ 125pcs တက်တူးထိုးစက်ညှပ်ကြိုးလက်ရှည်ကိုကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - အမျိုးအစားအမျိုးအစား - Tattoo Machine Clip ကြိုးလက်အိတ်ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပလတ်စတစ်အရောင်: အပြာရောင်အထုပ်အရွယ်အစား - ခန့်မှန်းခြေ။ ၅၀ * ၁၁၄ ...
Tattoo Aftercare Film အသက်ရှူနိုင်သော၊ ရေစိုခံ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် ၁။ လေကောင်းလေသန့်ထိုးခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားများမှလက်ဝါးကပ်တိုင်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးသည်။ ၂.၂၄ နာရီကြာမြင့်စွာအောက်စီဂျင်စုပ်ယူမှုကိုကာကွယ်ရန်အကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ 3. Tattoo ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုကာကွယ်ပါ၊ အပြင်ဘက်တီးရီးယားတွေကိုကာကွယ်ပါ။ 4. အလွှာသုံးလွှာသည်အလွှာ ၃ ခုရှိပြီးပထမအလွှာကိုဖျက်သိမ်းပြီးဒုတိယမျက်နှာပြင်ကိုအရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်ပါ။ ပြီးလျှင်ထိပ်ဆုံးအလွှာကိုဖြုတ်ပစ်နိုင်သည်။ ၆။ ယေဘူယျအားဖြင့် ၃ ရက်၊ Waterpr ...
အရည်အသွေးမြင့်သောပျံ့ဆေးညှပ်ဆေးဆေးဆေးပုလင်း ၂၅၀ မီလီမီတာ 500 မီလီမီတာတက်တူးထိုးပစ္စည်းအစိမ်းရောင်ဆပ်ပြာပုလင်း
အစိမ်းရောင်ဆပ်ပြာအတွက် Tattoo Diffuser ညှစ်ပုလင်းတက်တူးမှင်ဆေးကြောခြင်းအရက်မိတ်ဆက်များ - အမျိုးမျိုးသောဖျန်းခေါင်း၊ အနီ၊ ဦး ထုပ် Tattoo wash squeeze ပုလင်းပိုထူသောဘေးနံရံနှင့်အစိမ်းရောင်ဆပ်ပြာသို့မဟုတ်အရက်အတွက်သင့်လျော်သောရေမှုန်ရေမွှားအတွက်အလွန်အစားထိုးခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော တက်တူးထိုးပစ္စည်း - ABS စွမ်းရည် - ၂၅၀ မီလီမီတာ; 500ml အထုပ်တစ်ထည်အရွယ်အစား - 20X10X10 စင်တီမီတာအရောင် - အဖြူ၊ အဖြူနှင့်အနီ 250ml / 8.5oz ရှင်းလင်းသော LDPE လုံခြုံမှုဆေးဆေးပုလင်းပလတ်စတစ်ညှပ်ပုလင်း ...
Tattoo supply Transparent Ink Cup XL / L / M / S အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်သွင်ပြင်ရှိသည်။
- အရွယ်အစားကြီးသော၊ အလတ်နှင့်အငယ်စားပစ္စည်းများအတွက်မော်ဒယ်လ်သုံးမျိုးရှိသည်။ ပစ္စည်း - ပွင့်လင်းမြင်သာသောပလတ်စတစ် - အရွယ်အစားသေးငယ်သော: *11 * 10 mm (1000pcs / bag) - အလတ်စားအရွယ်အစား - ၁၄ * ၁၂ မီလီမီတာ (၁၀၀၀pcs / အိတ်) - ကြီးမားသော အရွယ်အစား: ၁၇ * ၁၄ မီလီမီတာ (1000pcs / အိတ်) - အလွန်ကြီးမားသောအရွယ်အစား - *20 * ၁၇ မီလီမီတာ (၅၀၀pcs / အိတ်) အရွယ်အစား - အရွယ်အစား ၄ ခု - # ၁၁ အသေးစား # ၁၄ အလယ်အလတ်နံပါတ် ၁၇ အကြီးစား # ၂၀ အလွန်ကြီးမားသောတက်တူးမင်ခွက်အဖုံးများ။ အိတ်တစ်ခုလျှင် ၁၁၀၀၀ သေးငယ်သည့်ပမာဏ၊ အိတ်တစ်ခဲလျှင် # ၁၄ အလတ်စား 1000pcs; အိတ်တစ်ခုလျှင် ၁၇ ပြား ၁၀၀၀၊ # 20 အလွန်ကြီးမားသောအိတ်တစ်အိတ်လျှင် 500pcs 1000pcs Disposable ...
Tattoo Ink Cups သည် Professional အမြဲတမ်းတက်တူးထိုးပစ္စည်းကိုအခြေခံမရှိဘဲထောက်ပံ့ပေးသည်
1. မြင့်မားသော Quanlity နိမ့်သောစျေးနှုန်းမှင်ခွက်။ 2. Disposable၊ ရှင်းလင်းသောဆေးမင်ကြောင်အနုပညာရှင်များအတွက်မင်ခွက်များ။ 3. ဆေးမင်ကြောင်ထိုးခြင်းနှင့်မိတ်ကပ်အတွက်ခြယ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်မင်ကိုအသုံးပြုသည်။ 4. ဆေးကြောရန်နှင့်သိုလှောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ အရောင်: အဖြူ၊ အဝါအရွယ်အစား - အသေးစား၊ အလတ်စား၊ အကြီးစား (၈ မီလီမီတာ၊ ၁၁ မီလီမီတာ၊ ၁၅ မီလီမီတာ) အစစ်အမှန်အလေးချိန် - အရွယ်အစား ၁၇၀ ဂရမ် / အိတ်ခန့်အရွယ်အစား 320g / အိတ်အရွယ်အစားအရွယ်အစား - 480g / အိတ်အရွယ်ကြီးမားသောအရွယ်အစား - 1000pcs / bag ★★ CUPS SIZES - ဒီ #9mm tattoo မှင်ခွက်သေးသေးလေး;3သင်ရွေးချယ်မည့်အရွယ်အစား #9# 13 # 16 ။ (မရောနှောအရွယ်အစား) ★ Package QU ...
Disableable Tattoo Grip Bandage မှသဘာဝ 5CM Grips များဖုံးအုပ်ထားသည်
မှော်တက်တူးထိုးညှပ်အဖုံး / ပတ်တီးမိတ်ဆက်: ၅၀ စင်တီမီတာ GRIP အဖုံး၊ အရွယ်အစားမည်သည့်အရာ၊ မည်သည့်စတိုင်များမဆိုချုပ်ကိုင်ထားသည့်အရောင်များစွာရှိသည်။ သင်မှာတဲ့အခါမှာသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရောင်များကိုချန်ထားပါ။ တစ်ခါသုံးအသုံးပြုခြင်း၊ လုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ စစ်ဆင်ရေးသည်ရိုးရှင်းပြီးသုံးစွဲရလွယ်ကူပြီးလူတိုင်းကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ပစ္စည်းယက်မဟုတ်သောအထည်များအရောင်အနီရောင်၊ အပြာရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ ပြောက်ကျားကော် Latex သို့မဟုတ် Latex-free အကျယ် ၅ စင်တီမီတာအသွင်အပြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောပေါ့ပါးသောအသုံးပြုမှုကိုတက်တူးထိုးညှပ်ထားသည့်ပတ်ပတ်လည်တွင်ပတ်ထားနိုင်သည် ...
Transparent Tattoo Ink Pointed ပုလင်းဆေးခြယ်ပစ္စည်းပလပ်စတစ်ပုလင်းများ 0.5oz 1oz 2oz 3oz 4oz
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Tattoo Ink ပုလင်းပလတ်စတစ် Point ပုလင်းအရောင်: ပွင့်လင်းပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်အလေးချိန်: 0.02KG Volume: 15/30/60/90 / 120ML အတွက်အသုံးပြုမှု: Tattoo, အမြဲတမ်းမိတ်ကပ် SIZE: 15ML 30ML 60ML 90ML 120ML Empty ပလတ်စတစ် Tattoo Ink Pigment Clear ပုလင်းများပလပ်စတစ် Tattoo Ink Pigment ပုလင်းအသုံးဝင်သော၊ သင်လိုချင်သောခြယ်ပစ္စည်းအားလုံးကိုတပ်ဆင်ရန်သင့်တော်သောမင်ကိုတပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖော်ပြချက် - အမျိုးအစားအမျိုးအစား: Tattoo Ink ပုလင်းအရောင် - ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူတူကျွန်ုပ်တို့၏ Tattoo Supplies များသည်ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည် ...
၁။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးတက်တူးထိုးရန်လုံလောက်သည်။ ၂။ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးရန်ဆေးခြယ်ရန်သို့မဟုတ်မင်ချခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး။ 3. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုနှင့်အိမ်အသုံးပြုမှုအတွက်သင့်တော်သည်။ 4. ထူးခြားသောဒီဇိုင်းနှင့်လှပသောအသွင်အပြင်သည်အိမ်အလှဆင်ခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောကိုက်ညီမှုဖြစ်စေသည်။ ၅။ အရောင် - အနက်ရောင်၊ ငွေရောင် MOLONG TATTOO SUPPLY ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာထူးခြားသောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောလက်ကားထိုးဆေးများထုတ်လုပ်သည်။ တက်တူးထိုးတာဟာလူတစ်ယောက်အပေါ်အကောင်းမြင်စေချင်တယ်။ နန်းတော်ရှိအနုပညာရှင်များစွာသည် ...